Ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa Al-shabaab oo ku dagaalamaya duuleedka Baydhabo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa Al-shabaab oo ku dagaalamaya duuleedka Baydhabo
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa Xarakada Al-shabaab uu weli ka soconaayo deegaanka Goof-gaduud.
Dagaalkaas oo saakay aroortii ka bilawday deegaanka Goof-gaduud ayaa sida la sheegay yimid, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar xoogan kusoo qaadeen ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugnaa deegaankaas.
Labada dhinac ayaa waxay dagaalkaan isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana wararka ay sheegayaan in ciidamo gurmad ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay deegaankaasi u ruqaansadeen.
Lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi, balse sarkaal ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in ciidankooda ay haatan gacanta ku haayaan deegaanka Goof-gaduud islamarkaana ciidankii Al-shabaab ee halkaasi ka saareen.
Ma jiro warar madax banaan oo xaqiijinaya hadalka sarkaalkaasi, waxaana dhowr jeer hore deegaanka Goof-gaduud ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada Koofur Galbeed oo garab ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya oo dhinac ah iyo kuwa Xarakada Al-shabaab.
Dagaalka ayaa lasoo sheegayaa inuu haatan sidii hore ka qaboobay, inkastoo mararka qaar la maqlaayo rasaas ay labada dhinac is-dhaafsanayaan.
Ugu dambeyntii, bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii gacan ku heynta deegaanka Goof-gaduud ay muddo saacado ah la wareegeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab, inkastoo markii dambe ay isaga baxeen halkaasi, kadibne ay la wareegeen ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaaliya.